Madaxweynaha Galmudug oo daah furay howlaha dhismaha golaha deegaanka | Jowhar Somali news Leader
Home News Madaxweynaha Galmudug oo daah furay howlaha dhismaha golaha deegaanka
Madaxweynaha Galmudug oo daah furay howlaha dhismaha golaha deegaanka
Munaasabad lagu daah furayey dhismaha Golaha deegaanka degmooyinka Galmudug laguna bilaabay degmada Cadaado ayaa maanta lagu qabtey xarunta Madaxtooyada Galmudug ee Cadaado.
Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qeyb galay Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada, Guddoomiye kuxigeenka 2aad ee Baarlamaanka iyo Saraakiil ka socday Hey’adda CRD iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Ugu horayn waxaa Munaasabada ka hadlay Duqa magaalada Cadaado oo sheegey in ka maamul ahaan ay u diyaarsan yihiin ku wareejinta xilka cidii la doorto.
Guddoomiyaha Guddiga Farsamada ee dhismaha Golayaasha deegaanka degmooyinka Galmudug ayaa dalbaday in lala fududeeyo dhismaha golaha deegaanka Cadaado, isagoo xusay in bulshada deegaanka ay fursad u heli doonto inay soo doortaan dadkii matali lahaa.
Cabdi Sheekh-Doon Nageeye oo ka mid ah Howlwadeenada Hey’adda CRD oo fududeyn doonta dhismaha golaha deegaanka degmooyinka Galmudug ayaa sheegay in Cadaado ay noqotay magaalada u horeysay ee laga daah-furay dhismayaasha golaha deegaanka ee Galmudug.
Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Berlanga oo kulanka dhanka Internet-ka uga qeyb qaatay ayaa sheegay in midowga yurub uu Galmudug ka caawin doono mashaariic hormarineed iyo dhismaha Golaha deegaanka.
Ugu dambeyn Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor ayaa sheegay in wixii hadda ka dambeeya la guda geli doono dhismayaasha golaha deegaanka, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii degmooyinka Galmudug u yeelan laheyd gole deegaan ay shacabka soo doortaan.
Golaha deegaanka Galmudug